Ukuba amazinyo okuqala omntwana anqunyulwa
Cosmetics kunye neengqumba
Ukucoca kunye nokuhamba
Psychology kunye nophuhliso
Abantwana Impilo yengane
Kuthekani ukuba amazinyo okuqala umntwana aphethwe? Olu luvavanyo olunzulu lwabazali kunye nabazali. Yintoni endiyifunayo?
Ngokuqhelekileyo kuzo zonke iintsapho unokuxelela amabali malunga nendlela amaqabunga aqhekezwa ngayo amazinyo. Inkqubo yokubonakala ngokwenyama yemvelo ihamba kunye neenguqu ekuphatheni komntwana wakho. Ubisi Pervochki
Ubisi obuthiwa ngamazinyo okuqala omntwana u-Hippocrates. Umama, obisi lwakhe lobuncu, ngelanga, akwanele, ungalilahli. Imixube yobisi yanamhlanje iinevithamini ezicebileyo, ngoko ke ukuba ingxelo yokuba amazinyo okufakelwa aphethwe kamva, sele sele iphela. Amazinyo omlambo (anamashumi amabini kuphela) aqala ukuzaliswa kwiiveki yesi-6-7 yokukhulelwa. Hlola ukuba khona kwamazinyo ezayo ngamazinyo ngendlela ekhethekileyo - i-radiovisiography. Yenzelwe ngenjongo yedokotela wamazinyo omntwana.
Kukho imeko xa abantwana bezalwa ngamazinyo. Njengomthetho, oku kukuvimbela isifuba ukuba siphuze (sibuhlungu umama), ngoko la mazinyo asuswa. Amazinyo okuqala aqala ukuphuma kwiinyanga ezili-3-4. Kodwa oku akuthethi ukuba lezinyo kufuneka "ziphume" ngokukhawuleza.
Ixesha lokutshatyalaliswa kwiintsana ziyahluka kakhulu. Uphawu oluqinisekileyo lokuba inyo lakho liza kubonakala lizinyo kukunyuka kwi-salivation. Amehlo omntwana ayanisela, uyakhonkxa aze atye. Nangona kunjalo, yonke into iyodwa. Ngonyaka umntwana kufuneka abe namazinyo angama-6-8, kwaye kwiminyaka engama-2 ukuya ku-5,5 ukwakha amazinyo obisi (okanye ukuluma ubisi, njengoko iingcali zithi) ziphela.
Ukungabikho kwamazinyo omntwana kwithuba elide okanye, ngokuchaseneyo, ukuba amazinyo omntwana anqunywe ngokukhawuleza - akayi kubangela ukukhathazeka. Mhlawumbi kukho i-small anomaly, ngenxa yoko, umzekelo, ukuzala. Kodwa ebusweni bezinye iimpawu, ukulibaziseka okukhulu kwixesha lokukhuphuka kunokunxulumaniswa nokubonakaliswa kwee-rickets. Xhumana nodokotela wezingane.
Xa kuhlolwa, ugqirha onolwazi uya kubeka ingqalelo ekubunjweni kwamathambo omntwana, ukuba kuyimfuneko ukulungiswa kwesondlo. Ngokuphathelele amazinyo asisigxina, ukubonakala kwabo akubuhlungu kakhulu. Amazinyo aqala ukutshintshela ekusisigxina kwiminyaka emi-5, kwaye olu tshintsho luphela kwiminyaka eyi-12-13. Iingxaki zingabangelwa "amazinyo ehlakaniphile", avela kwiminyaka eyi-15 ukuya kwe-30, kodwa ngaphambi koko, iipapati eziza kutshatyalaliswa zide zide kakhulu. Ubuhlungu kunye nokumemeza phakathi kobusuku nakho kubangele, ukuba iintsana zizinqunywe ngamazinyo.
Kodwa oku akukwenzeka rhoqo. Kwiimeko ezininzi, ngenxa yokubamba kwamazinyo rhoqo, abantwana banokuphumla, bahlaziyekile, baxhalabile, bazame ukukhangela indawo ephosakeleyo kuyo nayiphi na into, banokuphulaphula isigqi sokulala nokuvuka, zikhona iingxaki kwi-stool, ngamanye amaxesha inkunzi yenqaba ukutya.
Ukuphoqeleka umntwana, xa amazinyo akhe ehla, akunjalo! Imikhosi yomzimba wayo ngoku ijoliswe "ukuhluma" iinyo, kwaye ukutya ozama ukukwenza "ukungena kwi-crumb" akuyi kuguguzwa ubunzima. Mncede umntwana atye, kwaye ngokukhawuleza ukuvalelwa kwentlungu, uya kubamba. Ingane inokufumana umkhuhlane. Iimeko eziphazamisayo, ezihlala zihamba kunye nabantwana ngeli xesha, zachazwa ngaphambili kwinto yokuba amazinyo "anyuke" amazinyo.
Ukwenza inkqubo yobuhlungu ingabi buhlungu, umntwana ufuna i-calcium. I-Cottage shiese, apho iqulethwe ngobuninzi, iyona nto ingcono kakhulu kwiimvuthu. Kodwa ukuba i-calcium ayanele, ugqirha uya kubeka amalungiselelo e-calcium.
Ungaziqonda njani ukuba iimvuthu zinekholisi? Nika ingqalelo kwiinsini. Ngaphezulu kwamazinyo, i-gum iya kubonakala ivukile, ibomvu, ngokungathi ikhululiwe. Kuthiwani ukuba yonke imiqondiso ikhoyo, kunye nezinyo ixesha elide, kwiinyanga eziyi-1.5-2, afune ukubonakala, ukuzisa intlungu kubantwana abasweleyo? Kule meko, ugqirha uya kuqesha ithebhulethi ye-calcium, ekufuneka ithatyathwe ngokwecandelo elithile.
Ngeli xesha elinzima lomntwana, mnikeze ukuba ahlafune okanye alume into enzima okanye ibanda (ubusika bulethela uncedo olongezelelweyo). Kwii-pharmacy kunye neevenkile zithengiswa iifeteri ezikhethekileyo. Ngaphambi kokuba unike umntwana wabo, ama-tetherers apholile (kodwa musa ukuphefumla!) Efrijini. Ukuxiliswa komzimba wezinsini kuya kwenza lula ubomi bomntwana. Umama othandekayo onomnwe ococekileyo uhlalutya iinjongo ze-crumb, njengokungathi uzingca. Ukuba ayinakunceda, sebenzisa amayeza ase-homeopathic okanye i-anesthetic gels ene-anesthetic yendawo.
UZubki sele uvele? Buhlungu! Kodwa oku akuthethi ukuba ngoku awufanele ubalawule. Ewe, unjani umama onothando akafuni ukuba umntwana wakhe, njengengqungquthela yefestile, abe yinto enhle, yonke into enhle kwaye iluhlaza? Ukumomotheka okukhenkcezayo okubonisa ukuhle, okunempilo, kunye namazinyo kuyimpawu ebalulekileyo yobuhle. Ngoko ukuba umntwana wakho akahlupheki kwixesha elizayo, ungaqalisi amazinyo akho kwasebuncinaneni.
Amazinyo angamaxeshana enempilo - isibambiso samazinyo asisigxina.
Ukongezelela, ingcamango yokuba "amazinyo omntwana aya kuphinda aphume, ngoko kutheni uzikhathaze" - yinto ephosakeleyo.
Kwaye akukhona nje ukukhawuleza, kodwa kunye nemiba enzima kakhulu enxulumene nokubetha nokwenza i-squelette facial skeleton. Dibana nodokotela wamazinyo ukuba into ethile iphazamise umntwana. Luhlobo luni lokunyamekela umlomo? Emva konyaka, kunye nakwezinye iimeko ngaphambili, kucetyiswa ukuba ususe i-plaque kumazinyo.
Kwaye ungamvumeli umntwana usondele iminwe! Oku akukhona nje ukungahlali, kodwa kunceda ukutshintsha ukuthambekela kwamazinyo, okuqala ukukhula phambili.
Umntwana onjalo ngexesha lokutshintsha amazinyo ukuhlala unomphela unokufuna ukubonisana nomzimba we-orthodontist.
Njengabantu abadala , imeko yamazinyo, ngokuqinisekileyo, isichaphazela isondlo somntwana, ekudleni kwayo kufuneka ukuba kubekho ukutya okukhoyo kunye ne-calcium kunye ne-vithamini D. Kuye kwacaciswa ukuba i-calcium ngaphandle kwe-vitamin D ayinakunyuswa. Ngako oko, kubaluleke kakhulu ukuba umntwana akanako ukusilela ekusebenziseni ubisi kunye nemveliso yobisi. Musa ukulibala malunga neqanda leqanda kunye neoli (imithombo yevithamini D). Ezinye iimammy ziqala ukunika umntwana iilekese malunga neminyaka eyi-1.5. Xa usenza ixesha elide, bhetele! Yaye kungekhona kuphela kwindlela yokujonga ngayo amazinyo, kodwa kunye nesimo sempilo yonke. Nika abantwana abangaphantsi kweminyaka emithathu kwetshokolethi ayifanelekanga nhlobo. Ukuba ufuna into yokunambitha encinane (umzekelo, kefirchik) sebenzisa i-fructose endaweni yeswekile. Ku luncedo ngaphezu kwe-glucose kunye ne-sucrose. Kungcono unike ama-berries kunye neziqhamo (mhlawumbi, abo angenayo i-allergies). Oku kunene. Emva koko, yintoni iifomese? Ukuphawula kuphela kunye nomthombo wee-carbohydrate ezingaphezulu. Amazinyo omntwana wakho ayingxube, akanakukhathazeka? Caress kunye nokunyamekelwa kwabazali kwaye ingakumbi oomama ngoku afuna njengomoya. I-Prygolte crumb: ukukhala, ukukhala kunye nokuhlala rhoqo kuzonakalisa uhlamvu lwakhe. Mthande umntwana wakho, umnyamekele, kuquka amazinyo akhe, kunye nemizamo yakho ayiyi kuchitha. Xa ekhula, uya kuqiniseka ukuba wenze konke okusemandleni ukwenza umntwana aqiniseke phakathi koontanga kwaye aphumelele ebomini.
Indlela yokunika umntwana unyango?
Indlela yokubeka umntwana ukuba alale emini?
Umntwana ugawula amazinyo akhe ephupheni, yintoni isizathu
Ukunqongophala kwe-Iron anemia kwabantwana abancinci
Uneminyaka engakanani onokuyihlalisa umntwana?
Iimbangela zeentlungu zesisu kumntwana
Isikhumba seMichiza sitshisa umntwana
Ubuhle beeRook zokufumana umfazi wamanje
I-coat oatmeal ngaphandle kokubhaka
Iipropathi zokuphilisa iimbewu zamatope
I-Cherry i-compote ebusika kunye nelitye kunye ne-recitted-recipes kwi-jar-3 litre
Kutheni kungekho mntu uthi uthando?
Iyintoni ukusetyenziswa kwe-toothpaste kwindawo?
Ncedisa umntwana ukuba enze abahlobo
Amanzi njengomthombo we-silicon kumzimba wesetyhini
Iindawo zokulala ngesondo
Imilenze yenkukhu igolide
Ukubhiyozela uNyaka omtsha
Indlela yokwakha ubudlelwane obuqinile
Ijekethi ebomvu: yintoni ukugqoka
Isisu sokugaya u-Alena Apina oneminyaka engama-52 sasihlekwa usulu kwi-intanethi
I-Keratin iqondisa: isisombululo kwingxaki yeenwele ezibukhali
Indlela yokuphumelela indoda ayibonakali?
UPolina Gagarina utyhila igama lakhe lentombi, ifoto
© 2021 xh.inditics.com